Kheyraadka Dhaqaalaha - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Bukaan ahaan xarunteenna caafimaad, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad ku hesho dawooyin la awoodi karo iyada oo loo marayo barnaamijyada kaalmada farmashiyaha ama qiimo jaban oo laga helo farmashiyeyaal gaar ah. Waxaan kaa caawin doonaa go'aaminta u-qalmitaanka ka-qaybgalka iyo caawimaadda codsiyada.
WAANU SIINAAYNAA 340B QIIMEYNTA DAWO - weydii bixiyahaaga haddii aad uqalanto Barnaamijka Qiima dhimista Dawooyinka
Community Health Service Inc. (CHSI) waxay aqbashaa inta badan noocyada caymiska caafimaadka, oo ay kujiraan Medicaid, Medicare iyo qorshooyinka ganacsiga badankood. Fadlan na soo wac si aad u ogaato haddii aan aqbalno caymiskaaga. Waxaan codsaneynaa in bukaan socodka aan caymiska la kulmin badmaax si loo ogaado u qalmida ceymiska caafimaadka bulshada ama barnaamijyada kale ee kaa caawin doona bixinta adeegyadaada daryeelka caafimaadka.
Barnaamijka Kharash Bixinta
Haddii aadan qaadan caymiska caafimaadka ama ilkaha ama haddii caymiskaagu uusan daboolin adeegyada qaarkood, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad iska diiwaangeliso Barnaamijkeena Khidmadda Bixinta. Khidmadaha waa la dhimay iyadoo lagu saleynayo tirada qoyska iyo dakhliga soo gala. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad keento caddeynta dakhliga reerka, sida caadiga ah foomka 1040 ee cashuurta laga soo bilaabo sanadkii ugu dambeeyay, nuqul ka mid ah W-2-yadaada, Sooshiyaal Sikiyuuriti ama warbixinnada hawlgabka, jeegagga mushaharka, iyo wixii dakhli ah ee kale ee ka soo gala reerkaaga ka hor intaanay helin adeegyada. Haddii aadan u qalmin Barnaamijka Khidmadda Bixinta, waxaa lagugu soo dallacayaa qaddarka buuxa.
Lacag magac u yaal ah ayaa lagu dabaqi doonaa, iyadoo loo eegayo dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga, barnaamijka dhimista khidmadda sicirka. CHSI waxay bixisaa qiimo dhimis haddii ujradaada magacaaban la bixiyo maalinta adeegga. Qoraallada biilasha bukaanka waxaa loo diraa bil kasta. Su'aalaha ku saabsan biilkaaga, ka wac Kim halkan 218-236-6502. Si aad lacag u sameyso wac adiga rugta caafimaadka ama lacag ku bixi khadka tooska ah.
Barnaamijyada Kale ee Daryeelka Caafimaadka
Waxaad xaq u yeelan kartaa barnaamijyada kale ee gobolku bixiyo, sida SAGE (MN) iyo Jidka Haweenka (ND). Barnaamijyadan baaritaanka gobolka waxaa lagu bixiyaa iyada oo loo marayo Minnesota Department of Health iyo Waaxda Caafimaadka Waqooyiga Dakota loogu talagalay haweenka jira 40 iyo wixii ka weyn ee u qalma iyadoo lagu saleynayo tilmaamaha dakhliga.